Mukhtaar Roobow oo noqday musharixii ugu horeeyay ee is diiwaan geliya - Halbeeg News
FBI oo Mareykanka ku xirtay 3 Kenyan ah oo lagu eedeeyay in ay xiriir la leeyihiin ISIS
Ra’iisul wasaare Khayre oo la kulmay safiirrada Midawga Yurub ee Soomaaliya
Masuuliyiinta federaalka Itoobiya iyo maamulka Soomaalida oo uu khilaaf soo kala dhexgalay
Mucaaradka Kenya oo ku baaqay in ciidamadooda laga soo saaro Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya oo beenisay in hubkii loo adeegsaday weerarkii Nairobi ay Soomaaliya lahayd
Tababare Solskjær oo ka hadlay kaalinta Ferguson ee dib u soo kabashada Manchester United
Madaxweynaha Hiirshabeelle oo isku shaandheeyay golahiisa wasiirrada
Shirkadda What’sApp oo xadideysa tirada dadka loo diri karo fariimaha
Talyaaniga oo maalgelinaya jid tareen oo isku xira Itoobiy iyo Eritrea
Mukhtaar Roobow oo noqday musharixii ugu horeeyay ee is diiwaan geliya
BAYDHABO (HALBEEG)- Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa noqday musharixii ugu horeeyay ee uu aqbalay diiwaan geliyayna guddiga doorashooyinka maamulka koonfur Galbeed isaga oo ka qeyb geli doona doorashada bishan 17-keeda ka dhici doonto Baydhabo.
Guddiga doorashadda Koonfur Galbeed ayaa u ogolaaday Mukhtaar Rooboow in uu ka mid noqdo Musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimadda Maamulka Koonfur Galbeed, Iyadoo Dhowaan Dowladda Federaalka ay horay u sheegtay in Roobow uusan wali saaran yihiin Xayiraadii la saaray xilligii uu ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Maansuur, ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in uu noqdo Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ah ee Dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed, waxaa si weyn uga socda Olalaha Doorashada Madaxtinimada Koonfur Galbeed, Iyadoona Musharaxiin dhowr ah ay ku Sugan yihiin halkaas.
17-ka bishan Nofeember ayaa loo ballansan yahay in ay Baydhabo ka dhacdo doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed.
Shir looga arrinsanayo qorshaha kala guurka howl galka AMISOM oo Nairobi ka furmay
Shirka golaha amniga Jubbaland oo Kismayo lagu qabtay
Axmed Karaash oo loo doortay madaxweyne ku xigeenka Puntland
Canada oo qaabileysa in ka badan 1 million oo qaxooti ah